सुनिल ग्रोवरकै कारण ‘कानपुर वाले खुरानाज’ बन्द ! « Ramailo छ
सुनिल ग्रोवरकै कारण ‘कानपुर वाले खुरानाज’ बन्द !
भारतिय कडियन सुनिल ग्रोवरको शो ‘कानपुर वाले खुरानाज’ बन्द भएको छ । उनी गुत्थी र डाक्टर मसुर गुलाटीको भुमिका निभाएर चर्चित भएका हुन् ।
कपिल शर्मासँग छुट्टिएपछि सुनिलले सन् २०१८ डिसेम्बरमा आफ्नै शो सञ्जालनमा ल्याएका थिए । उनले छोटो समयमै शो बन्द गरेका छन् । सुनिलले शो बन्द गर्नुको कारण खुलाउदै भने, ‘यो शो मेरै कारण बन्द हुँदैछ । मैले ८ हप्ताको लागि मात्र साइन गरेको थिएँ । किनकी मैले पहिलै ‘भारत’को सुटिङको लागि डेट फाइनल गरेको थिए ।’
उनले थप्दै भने, ‘मैंले पहिलै प्रेस मिट र अन्तर्वार्तामा आठ हप्ता मात्र समय दिने प्रष्ट गरिसकेको छु ।’ सुनिल ग्रोवरको शो कानपुर वाले खुरानाज १६ एपिसोड प्रशारण भएको छ । सलमान खानको ‘भारत’ फिल्ममा सुनिलको लामो भूमिका रहेको छ । उनले हाल भारत बाहेक कुनै प्रोजेक्टमा आवद्ध नरहेको बताए ।